प्रभु येशू पुनरूत्थान हुनुभएको अवसरमा उपत्यकाव्यापी पुनरूत्थान (इष्टर) महोत्सव राजधानीको खुल्लामञ्चमा भव्यताका साथ सम्पन्न : NepalChurch.com
प्रभु येशू पुनरूत्थान हुनुभएको अवसरमा उपत्यकाव्यापी पुनरूत्थान (इष्टर) महोत्सव राजधानीको खुल्लामञ्चमा भव्यताका साथ सम्पन्न
[0] April 16, 2017	| Niroj Tolange
३ वैशाख, ललितपुर । काठमाडौं उपत्यकाका सम्पुर्ण स्थानिय मण्डलीहरूको सक्रिय सहभागितामा सम्पुर्ण इसाई धर्मवालम्बीहरूको महान पर्व अर्थात प्रभु येशूको पुनरूत्थान हुनुभएको अवसरमा उपत्यकाव्यापी पुनरूत्थान (इष्टर) महोत्सव राजधानीको खुल्लामञ्चमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
गएका वर्षहरूमाझैँ यस वर्ष पनि इष्टर महोत्सवलाई एकताको उत्सवको रूपमा भव्यताका साथ मनाइएको कार्यक्रममा खुल्लामञ्च भरिभराउ भएर चौरमा मानिसहरू खचाखच भएका थिए। महोत्सवमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानिय मण्डलीहरू आ आफनो ठाउँबाट शान्ति पदयात्रा सहित निस्किएर खुल्ला मञ्च पुगी महोत्सबमा सहभागी भएका हुन्। शान्ति पदयात्रा सजिलो र व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न ठाउँमा संयोजकहरू पनि तोकिएका थिए । कार्यक्रममा पास्टर प्रकाश सुब्बाले पुनरुत्थानको महत्व र यसले मानिसको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । यस वर्षको कार्यक्रमको लागि स्टेज, साउण्ड सिस्टम, टेलिभिजन, कुर्सी तथा पाल लगायतका निम्ति लागेको खर्चको व्यवस्थापन विगतका वर्षहरूमा झैं उपत्यकाका मण्डली तथा संघसंस्थाहरूबाट नै भेटी संकलन गरिनुका साथै खुल्लामञ्चमा भएको आजको कार्यक्रममा पनि भेटी संकलन गरिएको थियो। गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि पास्टर शामुएल कार्थकको अगुवाईमा रहेको ख्रीष्टय भजन क्वायर झुण्डले विभिन्न भजन गीत गाउनुका साथै आराधनामा पनि अगुवाई गरेका थिए। पास्टर पदम पराजुलीको शुरूको प्रार्थनाबाट शुरू भएको कार्यक्रममा पास्टर रूपनारायण तिमल्सिनाले स्वागत मन्त्व्य मार्फत सहभागि सबैलाई स्वागत गर्नुभयो । कार्यक्रममा पुरानो नियमबाट पास्टर के.बि. सुनुवार र नयाँ करारबाट पास्टर आर.पी. देवकोटाले बाइबल पाठ गर्नुभएको थियो । पास्टर डिल्लीराम पौडेँलको अगुवाइमा देशको लागि प्रार्थना समेत गरिएको थियो। पास्टर देवकुमार क्षेत्रीको धन्यवादको प्रार्थना र पास्टर अव्दियल मुखियाको आशिर्वाद पश्चात पहिलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रमसँगै विशेष सांगितिक कार्यक्रम सुरू भएको थियो।
सांगितिक कार्यक्रममा कार्यक्रममा विभिन्न मण्डलीका संगीत झुण्डले आ-आफ्ना सांगीतिक प्रस्तुति दिएका भने विभिन्न मण्डलीका युवा संगतिका तर्फबाट पनि सामुहिक नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमकै सिलिसिलामा भर्खरै मात्र जायोन मिडिया प्रा.लिको आयोजनामा सम्पन्न “भ्वाइस फर क्राइष्ट” गायन प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ३ ले आफ्नो बेजोड प्रस्तुति दिएका थिए। पास्टर ज्योती कुमार सुनुवारको शब्द संगितमा तयार पारिएको “हाम्रो प्रभु येशू साँच्चै बौरी….” बोलको गित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए।
« संसारको इतिहासमा र ख्रीष्टियन विश्वासमा यो हप्ता ठुलो परिवर्तन आएको समय हो
किम्ताङ, नुवाकोटमा इष्टर महोत्सव भव्यरूपमा सम्पन्न »